Itoobiya oo 11 sano ku xukuntay wariyayaal - BBC News Somali
Itoobiya oo 11 sano ku xukuntay wariyayaal
27 Disembar 2011
Image caption Wariyayaasha la xukumay ee Swedishka waxay u talaabeen gobolka ismaamulka Soomaalida markii la xiray.
Maxkamad ku taala Ethiopia ayaa laba suxufi oo u dhashay dalka Sweden ku xukuntay min 11 sanno oo xabsi ah.
Waxaa lagu eedeeyey in ay taageerayeen jabhadda ay dowladdu mamnuucday ee ONLF iyo in si sharci-daro ah ku galeen dalka Ethiopia.
Weriye Martin Schibbye iyo sawir qaade Johan Persson ayaa la xiray bishii todobaad mar ay u talabeen gobolka ismaamulka soomalida ee Ethiopia.
Todobaadkii hore ayey maxkamda sheegtay in ay dambi ku heshay suxufiyiinta, waxaana taasi cambaareeyey hay'daha u dooda xuquuqda aadanaha.
Qareenka suxufiyiinta oo Jooga dalka Sweden ayaa Cambaareeyey xukunkan. Ciidamada Ethiopia ayaa qabtay labada suxufi lix bilood ka hor, ka dib dagaal dhax maray ciidamada Itoobiya iyo jabhadda ONLF ee ka dagaalanto gobolka ismaamulka soomalida ee dalka Ethiopia, gobolkaas oo ah gobol aanan loo ogoleyn weriyayaasha.
Ethiopia ayaa u aqoonsan jabhadda argigixiso. Garsooraha xukunka ku riday suxufiyiinta ka soo jeeda Sweden ayaa ku eedeeyey Jabhadda in ay iaydu abaabushay safarka weriyayaasha laga soo bilaabo markii ay ka soo kicitimeen magaalada London.
Qareenada difaacayey weriyaasha ayaa qorsheenaya in ay kullan ku qabtaan safaarada Sweden ku leedahay Ethiopia waxayna ka baaran-degi doonan suurtagalnimada ah in ay racfaan ka qaadan karaan xukunkaasi iyo in kale.
Afhayeen u hadlay wasaarada arrimaha dibeda ee dalka Sweden ayaa ku sheegay xukunaka mid la filayey balse waxa uu raaciyey in uu yahay mid laga shalaayo.
Waxaa uu sheegay in Sweden ay madaxda sare ee ethiopia kala xiriirtay arrinta suxufiyiinta.
Labada weriye waxay si madax baanaan wararka u siin jireen wakaalad kuwa wararka ah oo laga leeyahay dalka Sweden.